Imiboniso & Iziganeko
Umyalelo owaneleyo? Imiyalelo yorhwebo lwangaphandle ishushu? Uqikelelo lwentengiso yentsimbi engenasici!
Ixesha lokuposa: Mar-01-2021
Emva kweveki yokunyuka, njengoko izixhobo zokugaya ezinkulu zentsimbi zibekiwe zigcinwa zilandelelana, kodwa umlambo ongezantsi awukangeni kwimarike, imarike eshushu ehlelayo iphinde yehla, kwaye nexabiso lentsimbi engenasici liyehla . Usuku lokuthengisa lukaFebruwari luphelile. Ke njani ...Funda ngokugqithisileyo »
Inkqubo yokuqala yentsimbi yokuhambisa kunye nokusasaza yeJianlong Group imalunga nomhlaba
Ixesha Post: Feb-26-2021
Nge-22 kaFebruwari, iJianlong Group, i-China Railway 9th Bureau Group Co, Ltd. (ebizwa ngokuba yi-China Railway 9th Bureau), kunye ne-Jianke Machinery (Tianjin) Co., Ltd. (ebizwa ngokuba yi-Jianke Machinery (Tianjin)) ebanjwe kathathu iintetho eShenyang, kwiPhondo Liaoning. Ityikitye “iNtsebenziswano phakathi kwabathathu ...Funda ngokugqithisileyo »
Iyaqhubeka ukuba phantsi koxinzelelo izolo, uLun Nickel wawa ngaphezulu kwe- $ 500 kurhwebo lwangaphakathi
Ixesha Post: Feb-24-2021
U-Lun Nickel ukhawuleze wehla izolo. ILun Nickel ivulwe nge-US $ 19,500 / ngetoni, emva koko yakhutshwa ngokukhawuleza. I-intraday ephezulu ibethe amanqaku angama-19,900, kwaye ukunyuka okukhulu kwaba phezulu kuma-380 eedola. Emva koko, yaqhubeka ukuba buthathaka. Olona suku luphantsi lwe-intraday lubethe amanqaku angama-18,985, kwaye okona kwehla kwe-intraday kwaba ngama-535.Funda ngokugqithisileyo »
Ukuxhotyiswa kwedijithali! Uphando oluzimeleyo kunye nophuhliso lwale nkampani inombhobho wentsimbi eSongyang inamandla amakhulu!
Ixesha Post: Feb-23-2021
Njengenye yeenkampani zombhobho zensimbi ezingenasici zikaSongyang, uShangshang Desheng Group Co., Ltd. uzibophelele ekwakheni umzi-mveliso okrelekrele okoko wazinza eSongyang ngo-2014. Kule mihla, inkampani iyayiqonda ingqiqo kuzo zonke iinkalo zemveliso, imveliso, umgangatho uhlolo, a ...Funda ngokugqithisileyo »
I-chromium ephezulu iyaqhubeka nokubiza, kodwa i-stainless steel ayinyuki kakuhle
Ixesha Post: Feb-22-2021
Emva kweholide ende yoMthendeleko weNtwasahlobo, ixabiso le-chromium ephezulu lenyuka ngoko nangoko emva kokuvulwa kweemarike. Ukuza kuthi ga ngoku, iikowuteshini eziqhelekileyo zabavelisi bechromium eziphezulu zonyuke nge-300 yuan / 50 yeetoni zesiseko emva kweholide ukuya kuthi ga kwi-8,800-9000 yuan / 50 yeetoni, ngokukhawuleza ...Funda ngokugqithisileyo »
Amaxabiso e-Iron ore anyukile, abetha phezulu ngoku phantse iminyaka esi-8
Ukusukela ngo-Novemba kulo nyaka, amaxabiso esinyithi angene kwixesha lokukhula okukhawulezayo. Nge-21 kaDisemba, ixabiso lokuvalwa kwekhontrakthi yentsimbi ephambili ye-iron ore yafikelela kwi-1144.5 yuan / ton, irekhodi eliphezulu ukusukela kwixesha elizayo le-iron ore lalidwelisiwe ngo-2013.Funda ngokugqithisileyo »
Ubhubhane uhlasela, iinkampani zentsimbi zehlabathi zilwa nalo bhubhane ukuqinisekisa ngemveliso
Abachaphazelekayo sisithsaba esitsha somoya ubhubhane wenyumoniya, intsimbi yehlabathi kunye neenkampani ezinxulumene nokunyuka kunye nokuhla zinqamleza imveliso kwaye bayeke imveliso ukusukela ekuqaleni konyaka we-2020. Ibango liye lancipha, ukubonelelwa kuvaliwe, kwaye bajongane neendleko eziphezulu zokucima kunye noxinzelelo olukhulu lwemali. ..Funda ngokugqithisileyo »
NgoJanuwari 13th: Ikamva lensimbi engenasici yenyuka nge-170 yuan / ngetoni, ngesiseko se-950 yuan / itoni
Ixesha elizayo leentsimbi ezingenasici liye latshintsha ngamandla, ikhontrakthi engama-2103 yavala i-yuan eyi-170 yaya kwi-13,910 yuan / ngetoni, kwaye ikamva lesinyithi elingenaxabiso le-2103 ixabiso lokuhlawulwa kwekhontrakthi yayiyi-13,920 yuan / ton. Namhlanje, i-304 / 2B yabucala yexabiso lokucheba iinyawo ezine kwimakethi yendawo yeWuxi yi-14,870 yuan / ton ...Funda ngokugqithisileyo »
I-TISCO "ithatha ubunini" iBaowu yentsimbi engenasici, utshintsho olutsha
Ixesha Post: Jan-04-2021
U-2021 uqalile, kwaye ukusebenza kanye kweBaowu emva kokudityaniswa kwakhona kweTaigang nako kuqalile, nganye nganye… Nge-23 kaDisemba, iTISCO yabhengeza ukuba kugqibe ubhaliso lotshintsho kwimizi-mveliso nakwezorhwebo, kwaye umnini zabelo olawulayo watshintshelwa eChina Baowu , ukumakisha ...Funda ngokugqithisileyo »
Iindlela ezininzi zokonyango zomphezulu kumbhobho wesinyithi
Xa uninzi lwemibhobho ye-stainless steel ishiya umzi-mveliso, ziyafana kuninzi lweemveliso esizibonayo kubomi bethu. Umphezulu upolishiwe, ubonakalisa ubumenyemenye besinyithi obumhlophe, kwaye uthe tyaba kakhulu kwaye agudile. Lo ngumbhobho womhlaba oqaqambileyo odla ngokufowunelwa ngumntu wonke. Ukongeza, kwezo zinto ...Funda ngokugqithisileyo »
Usihlalo weBaowu wase China kunye neqela lakhe bezimase umsitho wokubhiyozela uvavanyo lwe umthwalo weBaosteel Desheng 1780
Ngentsasa ka-Disemba 14, uthotho lwemisebenzi yokwazisa kunye nemfundo enikezelwe "kwiminyaka eyi-130 yaseBaowu e-China" kunye nomsitho wokubhiyozela uvavanyo olushushu lomthwalo weprojekthi ephambili Baosteel Desheng 1780 Isinyithi esisangqa esishushu esenziwe ngentsimbi engenanto kwiPhondo laseFujian ibibanjelwe eBaosteel ...Funda ngokugqithisileyo »
I-HBIS 60,000-itoni yebhulorho yentsimbi ixhasa iPingtan Strait Bridge
Kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo, ibhulorho yamazibuko amabini asebenzisa uloliwe owela elwandle kunye nelona lizwe lide lisebenzisa umgaqo kaloliwe omninzi osebenzisa iindlela ezimbini kunye nomgaqo webhulorho iPingtan Strait. Ngexesha lokwakhiwa kwebhulorho, i-HBIS ibonelele ngaphezulu kwe-60,000 yeetoni eziphezulu -...Funda ngokugqithisileyo »